The Voice Of Somaliland: Doorashada Shir Gudoonka Golaha Wakiilada Somaliland
Doorashada Shir Gudoonka Golaha Wakiilada Somaliland
Dhammaan Qaranka Somaliland
Ujeedo: Doorashada Shir Gudoonka Cusub
Aniga oo ku hadlaya dhammaan magaca gudiyada XisbigaKulmiye ee dalkan UK, xubnaha & taageerayaasha Kulmiye(UK), waxaan hambalyo u dirayaa dhamaan xubnaha GolahaGuurtida Somaliland ee ku guulaystay in ay kamidho-dhaliyaan khilaafkii ku yimid doorashadii ShirGudoonka Golaha Wakiilada Somaliland, Go'aankooda ooku saleeyey distoorka qaranka sida uu qoraayo. Waxa kale oo mudan in la xusso sida miyir-ka-qabta eexisbiyadu arrintaa uga qayb galeen, una aqbaleennateejadii ka soo baxaday dhexdhexaadintaa GolahaGuurtida.
Waxaanu dhammaanteen idiin soo gudbinaynaa dareenkawadannimo ee qurba jooggo Somaliland ku soo dhaweeyeen furdaaminta arrinkaas. Waxaanu rajaynaynaa in mustaqbalka, muxaafid iyo mucaarid iyo dhexdhexaaduba wax ku qabsan doonaan sidauu distoorka qaranku dhigaayo. Sharciga iyo Distoorka qofkastaa, siyaasi kasta, xisbikasta, gole kasta, urur kasta iyo hay'ad kastaba ayugu dhaqmaan si waafaqsan. Arrinkani waa inuu noqdaa mid taariikhda gala.
Mar labaad, waxaan tahniyada iyo bogaadin u diraynaaxubnaha cusub ee loo doortay Golaha WakiiladaSomaliland.
Cabdiraxmaan M cabdillahi Gudoomiye
Cabdicasis M Samaale Gudoomiye-ku-Xigeen
Baashe Faarax Gudoomiye-ku-Xigeen
Eebe ha idiin fududeeyo hawshaas culus, xaqqa iyocadaaladana ha idin garansiiyo.
AamiinEebe mahad leh
Maxamed Yonis Awale
Gudoomiyah Xisbiga Kulmiye